Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Lelee nlegharị anya ụwa maka njem nlegharị anya na iyi ọha egwu
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • LGBTQ • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • WTN
Taa ogbaaghara na ụjọ ọgụ na
Ọdụ ụgbọ elu mba Hamid Karzai dị na Kabul, Afghanistan na Baron Hotel dị nso bụkwa onye na -agbanwe egwuregwu maka ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
Onye isi oche ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nke ụwa Dr Peter Tarlow na -ewepụta akụkọ na echiche ya.
Mwakpo nke taa na Kabul, Afghanistan bụkwa mwakpo na njem nlegharị anya ụwa.
August 26th mwakpo ndị nkịtị ọdụ ụgbọ elu Kabul na -anwa ịpụ na Afghanistan na -echetara anyị ihe egwu dị na Afghanistan.
Ka ụbọchị ikpeazụ maka ọpụpụ US na ndị ha na ya jikọrọ aka na mba ahụ na -abịaru nso, ọ dị mkpa ka ndị ọkachamara na -ahụ maka njem nlegharị anya nwee ume miri emi ma tụlee mmetụta mmeri Taliban nwere na ụwa nke ndị njem.
The Network Njem Nleta Ụwa na -eche na ọ dị mkpa maka mpaghara a zuru ụwa ọnụ ka ọ ghara ịdaba na mmepe zuru ụwa ọnụ ugbu a na COVID, Mgbanwe ihu igwe na iyi egwu.
Onye isi oche WTN Dr. Peter Tarlow onye bụkwa onye ama ama ama ama na nchekwa na njem na njem njem na -ede, sị:
Njem nlegharị anya adịghị iche na ọtụtụ ọgbaghara zuru ụwa ọnụ ugbu a
Ọ bụ ezie na a ga -enwe ọtụtụ akụkọ gbasara iweghara ndị Taliban nke Afghanistan edere site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ naghị ekwekarị omume ikewapụ ụwa nke omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ụwa nke njem. Dịka ọmụmaatụ, mwakpo Al Qaeda na Septemba 2001 bụ omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mana nsonaazụ ya bụ akụ na ụba ozugbo maka njem na ụlọ ọrụ njem na -enwe mmetụta ihe dị ka afọ iri abụọ ka emechara mmegharị nke Septemba 11, 2001. Septemba 2021 agaghị abụ naanị akara afọ iri abụọ kemgbe. mwakpo a na-akpọkwa 9-11 (Septemba 11th) mana mmalite nke oge nwere ike bụrụ nke dị ize ndụ maka ụwa ndị njem.
Ọ dịghị onye maara ihe ụwa njem ga -adị n'ime ọnwa isii, otu afọ, ma ọ bụ afọ abụọ site ugbu a. Ndị na -ahụ maka njem na -adị mfe mgbe niile maka ihe omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ nke akụ na ụba nke a na -akpọkarị "nwa swan".
Ka nkwukọrịta dị elu na -eme ka ọ dị ka ụwa na -etowanye ntakịrị, na ihe amara na gburugburu ụwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo ọ na -egosi na ebe ahụ ọnụ ọgụgụ ihe omume swan ojii na -abawanye ka oge na -aga.
Ihe omume ndị a na -emetụtakarị mkpebi njem anyị, maka ihe ụtọ na maka azụmahịa. Ndị ọrụ nlegharị anya kwesịrị ịdị na -echeta mgbe niile na ebili mmiri nke akụkọ ntolite abụghị ihe omume otu, kama ọ bụ nnukwu ihe omume. Ọ bụ ihe ijuanya na ngwakọta ndị a yiri ihe a na -agaghị atụ anya tupu ha emee mana otu mgbe ọ mere ka ọ bụrụ ihe na -ele anya na ọ bụ nsonaazụ ezi uche.
Ihe ndị mere na ngwụcha oge ọkọchị nke 2021 na -egosipụta atụmanya nke ihe a na site na njem, echiche ụlọ ọrụ chọrọ nyocha nke ọma. Agbanyeghị na m na -ede akụkọ a site na echiche United States, n'eziokwu, ọtụtụ n'ime mmiri iyi akụkọ ihe mere eme a ga -emetụta ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ụwa.
Oge ọkọchị nke 2021 jupụtara ma ihe ịma aka ọhụụ na nke edozighi. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ njem na-atụ anya na ka ọ na-erule ngwụcha oge ọkọchị nke ugwu ugwu na ọrịa COVID-19 ga-abụ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme kama ịbụ ihe ịma aka na-aga n'ihu.
Delta Variant nke ọrịa COVID kwụsịrị olileanya ahụ.
N'ọnwa Ọgọstụ nke 2021 ọtụtụ ụwa na -arapara n'okwu dị ka ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ na ọ bụrụ na ịgba nke atọ dị mkpa. Ọnwa isii gara aga, ọ nweghị onye, ​​ma ọ bụ mmadụ ole na ole nụtụrụla banyere Delta variant nke COVID.
Ebe nlegharị anya, dị ka Hawaii, na -enwe ọganihu, na enwere olile anya na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri ga -amalite n'ụkwụ ya n'oge na -adịghị anya.
Kama, anyị na-agụ isi okwu dịka: “Gov. Hawaii na-akụda njem gaa na steeti n'etiti ọnọdụ COVID-19” (akwụkwọ akụkọ njem & ntụrụndụ), ma ọ bụ Ntinye akwụkwọ njem Hawaii bụ ugbu a mkpebi ndụ na ọnwụ. (eTurboNews)
Mmụba a na ikpe covid na -eme n'otu oge US (na ọtụtụ ụwa) na -enwe oke mbubata ọnụ ahịa n'ime iri afọ.
Isi akụkọ dị ka nke na -esote site na CNBC (Julaị 2021) “Ọbara na -arị elu karịa ka a tụrụ anya na June ka ndepụta ọnụahịa na -ebili 5.4%” kwuo ihe onye ọ bụla na -azụ ahịa maralarị. Ọ dị mkpa ka ndị ọrụ nlegharị anya ghọta mmetụta nke onu oriri dị ka ndị lara ezumike nka nwere ahụ ike na -edepụta akụkụ buru ibu nke ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya. Akụkụ a nke ọha na -ejegharị ejegharị na -ebikarị na ego a kapịrị ọnụ, ọ na -emetụtakwa ọnụ ahịa ịrị elu.
Nsogbu ọzọ na -emetụta ụlọ ọrụ njem bụ mpụ
. Dịka ọmụmaatụ na akụkọ akụkọ BBC na Julaị 7th banyere mpụ na America na -ekwu, sị: “The New York Times lere anya n'obodo 37 n'ofe US site na data ọnwa atọ mbụ nke afọ a (2021), na mkpokọta enwere mmụba 18% ma e jiri ya tụnyere otu oge na 2020. "
Isi akụkọ dị otú ahụ gburugburu ụwa na -akụda njem njem na United States ozugbo ókèala ya mepere. Mpụ mpụ ahụ emetụtala njem ime obodo na obodo US ndị dị ka Chicago, Portland, Oregon, Miami, Houston, San Francisco, Seattle, Washington, DC, na New York City.
The ọgụ na ọdụ ụgbọ elu Kabul taa na -akọwapụta na njem ugbu a na -eche ihe egwu ọhụrụ ihu.
Ka ọ dị ugbu a, onweghị onye ma kpọmkwem etu ogbugbu ndị Taliban ga -esi weghara Afghanistan ga -adị na njem nlegharị anya ụwa.
Ihe anyị maara bụ na Afghanistan nọzi n'okpuru ikike zuru oke nke otu ndị na -eyi ọha egwu. Ọchịchị ndị Taliban na-achị Afghanistan afọ iri abụọ gara aga rụpụtara ebe nchekwa maka ndị na-eyi ọha egwu Al-Qaida na ọtụtụ mwakpo megide ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na njem nlegharị anya dịka New York's World Trade Center.
Eziokwu ahụ bụ na otu ndị Alakụba na -achị Afghanistan na -achịkwa Afghanistan ugbu a na -eme ka ọnọdụ ahụ dị iche na nsogbu ndị ọzọ dị ugbu a, ọkachasị dịka njem na -arụbu ọrụ n'oge gara aga dị ka ndọta maka mwakpo iyi ọha egwu. Enwere ike maka ndị na-eyi ọha egwu na-emerụ nnukwu ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ugbu a karịa mgbe ọ bụla kemgbe mwakpo 9-11.
Nchịkọta ngwa ngwa nke ụfọdụ ihe ịma aka ọdịda ọdịda Afghanistan pụtara maka njem nlegharị anya ụwa:
Njem nwere ike isi ike karịa ma dị ize ndụ karị. Eziokwu ahụ bụ na enwere puku kwuru puku ndị na-enyochaghị nke hapụrụ Afghanistan pụtara na enwere ohere na opekata mpe ụfọdụ n'ime ndị a nwere ike bụrụ akụkụ nke mkpụrụ ndụ ụra na gọọmentị ga-akpachapụ anya ruo mgbe amata onye bụ. na -ejegharị ejegharị na maka ọnọdụ ọ bụla.
Borderkè US na Mexico, nke dịlarị ize ndụ, ga-adịwanye ize ndụ. United States n'ime ọnwa asaa gara aga enweela iwu "mepere emepe". Ndị na -akwaga mba ọzọ ma ọ bụ ndị na -enyochaghị nke ọma ugbu a na -abanye United States site na mba enyi na enyi. Ụfọdụ n'ime ndị a na -abịa n'ihi mgbaba ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ohere akụ na ụba. Ndị ọzọ nwere ike na -abịa maka ebumnuche ndị na -adịchaghị mma ma ozugbo na US ha nwere nnwere onwe ịga ebe ọ bụla masịrị ha. Mbugharị a na-akwụsịghị akwụsị akwụsị ebutela mpụ na ọrịa gụnyere Covid.
Europe kwesịrị ịtụ anya mmụba nke ndị gbara ọsọ ndụ na -amaghị nke ga -aga n'ihu na -eme Europe ka ọ ghara inwe nchekwa yana ghara ịmasị ndị ọbịa. Ihe ga -esi na ya pụta ga -adalata n'ụkpụrụ ibi ndụ ndị Europe na ịdị mma nke ndụ.
Isi mmalite ego ndị Taliban, ọgwụ na -akwadoghị na ọkachasị mmepụta nke heroine, ga -abawanye na mmụba a ga -ebute nsogbu maka ụlọ ọrụ njem. "Ndị ọrụ ugbo ọgwụ ọjọọ" agaghị atụ egwu ihe ọ bụla ọzọ karịa onye ọnaụtụ na nsonaazụ ya nwere ike bụrụ mmụba dị ukwuu n'ịzụ ahịa ọgwụ (yana ikekwe ọbụna mmekọahụ) gburugburu ụwa, ọkachasị na mba ọdịda anyanwụ. Ọ bụ mba ndị a na -emepụta ọtụtụ njem nlegharị anya ụwa.
Mwepu mberede nke United States na Afghanistan na enweghị nhazi ya na ndị otu NATO nwere ike bute mmekorita NATO na -ada ada kpọmkwem n'oge njem nwere ike ihu iyi egwu iyi ọha egwu ọhụrụ. Industrylọ ọrụ njem ga -adị mkpa ka ya na ọtụtụ ụlọ ọrụ gọọmentị rụọ ọrụ megide iyi egwu iyi ọha egwu ọ bụla ma ọ bụ mpụ a haziri ahazi.
Eziokwu ahụ ugbu a ndị China na -ahụ America na -adịghị ike nwere ike gbaa mwakpo na Taiwan ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ nke oke osimiri South China. Ọdịdị enweghị ntụkwasị obi dị otu a nwere ike na -emerụ mgbake njem njem ma n'akụkụ oke osimiri Asia Pacific na mba ndịda Eshia Njem nlegharị anya na mpaghara a nwere ike bụrụ nke ndị China na -achị na mba ndị dị ka North Korea nwere ike nwee obi ike ime ihe n'echeghị echiche. Ekwesịrị icheta na ọtụtụ n'ime ibu nke ụwa na -aga n'ụgbọ mmiri na mwakpo a na -eme n'oké osimiri nwere ike ibute ọnụ ahịa njem.
Ọdịda Kabul bụ ịkpọte ndị na-eme njem nlegharị anya. Nke a abụghị oge ịbelata nchekwa ndị njem mana kama mee atụmatụ maka oge nwere ike isi ike.
Ndị isi njem nlegharị anya ga -arụkọ ọrụ na gọọmentị ha, ụlọ ọrụ mmanye iwu, na ministri ahụike ha iji mepụta ọnọdụ maka ụlọ ọrụ njem na -agbasawanye yana nchekwa na nchekwa dị ukwuu.
Oge ndị a agaghị abụ oge dị mfe, mana ụlọ ọrụ njem nke ọ ga -adị ndụ ga -emerịrị ihe dị adị, ga -adịrịrịrị njikere maka ihe kachasị njọ, mana n'otu oge ahụ na -ekpe ekpere maka ihe kacha mma na ọrụ ijikọ ndị mmadụ ọnụ.
WTN bụ olu ogologo oge nke obere njem na obere azụmaahịa na azụmaahịa njem gburugburu ụwa. Site na ijikọ mbọ anyị niile, anyị na-ebute ụzọ na mkpa na ebumnuche nke obere azụmaahịa na obere yana ndị nwere oke.
Ozi ndị ọzọ gbasara ịbụ ndị otu na mmemme na -aga www.wtn.travel